Bloopers | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE! Bloopers | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE!
Nke a bụ a ọhụrụ online ohere mpere SMS ugwo saịtị ulo oru site elk nka. Nke a nkiri-themed Bloopers bụ playable gafee niile smart ngwaọrụ. Na orchestral soundtracks, esi anwụde agụnye niile film metụtara imagery. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ oghere egwuregwu na awade ụfọdụ n'ezie dị mma bonus atụmatụ.
Play na Win na New ohere mpere SMS ugwo saịtị
Nke a oghere egwuregwu na-abịa na 5 -esi anwụde, 3 ahịrị na-enye 243 ụzọ isi na-mmeri. E nwekwara a mara mma mmeghe video na-eme elu idaha a oghere egwuregwu na-ewebata dị iche iche na-agụ akụkọ na egwuregwu. The egwuregwu nwere ike na-amalite gameplay na a kacha nta nzọ nke £ 0,25 na kacha nzọ nke £ 100,00. Nke a ohere mpere SMS ugwo saịtị na-awade jackpot nke banyere 600x ọkpụkpọ si eto.
Nke a ọhụrụ oghere mejupụtara elu uru na akara dị ka a nwoke na nwaanyị ụzọ kpakpando, esi anwụde nke film na a clapper board. N'akụkụ aka nke ọzọ, 10, J, Q, K, na A na-ewere dị ka ala ụkpụrụ. The ọhịa akara a kọwara site Wild Bloopers logo. Ọ ga-anọchi ndị ọzọ niile na akara iche si bonus akara. Ebe ndị bonus akara bụ 'Walk of Fame' kpakpando na a-akpali isi mma.
Enwe Daashi Atụmatụ na ohere mpere SMS ugwo saịtị
Nke a na-egosi enweghị usoro n'ime free spins na isi egwuregwu. E nwere ihe 5 dị iche iche Blooper odide na-awagharị n'elu-esi anwụde na kwughachi onye Obere-bonuses dị ka ndị a:
Na Base Game:
Sound Tech- Nke a Blooper nsị nnyapade wilds n'elu-esi anwụde na-akwụghachikwa a free atụ ogho.
Na Free spins:
stunt Man- Nke a Blooper Nyefe wilds n'ime ịgbasa wilds.
cutter- Nke a Blooper na-ahụ ndị 'na-ada akara' nke nwere ike na-etolite ọhụrụ emeri n'ịgwa.
Techaa- Nke a Blooper akwụghachikwa mmezi free spins.
Idozi-Ọ- Nke a Blooper na-akpali ndị na akara gburugburu iji ike na-emeri ihe n'ịgwa.
Free spins ga-arụ ọrụ site na ọdịda 3 ma ọ bụ karịa bonus kpakpando si ekpe aka nri n'elu-esi anwụde. Onye ọ bụla nke kpakpando ga-egosi logo maka akpan akpan Blooper. Ọzọkwa, ndị a ga-aghọ ike n'oge free spins gburugburu.